ထုတ်ကုန်များ > 2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine (3932-97-6)
, ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 2,4-Dichloro-5- (trifluoromethyl) pyrimidine (3932-97-6) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
5-Trifluoromethyl-uracil 2,4 ပေးရမယ့်ဖလိုရင်းအေးဂျင့်တွေနဲ့အဆုံးစွန်သောတုံ့ပြန်နောက်ထပ် 5-dichloro-2,4-trichloromethylpyrimidine ပေးဖို့အကြီးအကျယ်အခြေအနေများအောက်၌ရရှိလာတဲ့ 5-dichloro-2,4-methyl-pyrimidine chlorinating, ပျော့အခြေအနေများအောက်တွင်သိုင်မင်း chlorinating ဖြင့်ရရှိသောဖြစ်ပါတယ် -fluorinated နှင့် / သို့မဟုတ်5trifluoromethylpyrimidines -chlorinated နှင့် Hydrolysis ဤအောက်။ အဆိုပါဝတ္ထုဓာတု 2,4-dichloro- 5-trichloromethylpyrimidine နှင့် 2,4-difluoro-5-trifluoromethylpyrimidine ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏သင်တန်းတွင်ရရှိခဲ့ကြသည်လိမ်း။ ထောက်ပံ့ဆေးဝါးနှင့် agrochemicals နှင့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူတူပင်ထုတ်လုပ်ဘို့နည်းလမ်းများများအတွက်အလယ်အလတ်အဖြစ်အလယ်အလတ်အဖြစ်အသုံးဝင်သော 5- (trifluoromethyl) pyrimidine အနကျအဓိပ်ပါယျဖြစ်ကြသည်။ 2,4-dichloro-5- (trifluoromethyl) pyrimidine ရည်ရွယ် 2,2,2- (2-trifluoroethoxy) -2,2,2-chloro-4- (trifluoromethyl) pyrimidine, 5-benzyloxy-2 ရရှိရန် 4-trifluoroethanol, benzyl အရက်, ဒါမှမဟုတ် benzenethiol နှင့်အတူတုံ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ် -chloro-5- (trifluoromethyl) pyrimidine, 2,4-bis (2,2,2-trifluoroethoxy) -5- (trifluoromethyl) pyrimidine, ဒါမှမဟုတ် 2-chloro-4-phenylthio-5- (trifluoromethyl) pyrimidine ။
MDL အရေအတွက် MFCD03426408
InChI Key ကို IDRUEHMBFUJKAK-UHFFFAOYSA-N ကို
ဓာတုအမည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်း 2,4-Dichloro-5- (trifluoromethyl) pyrimidine
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံ Clear ကိုအရောင်အရည်
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 216.98
အပြုံး C1 = ကို C (ကို C (= NC (= N1) □) □) ကို C (F ကို) (F) က F
2,4-Dichloro-5- (trifluoromethyl) pyrimidine (3932-97-6) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
2,4-Dichloro-5- (trifluoromethyl) pyrimidine ကြိုတင်ကာကွယ်မှုကြေညာချက်:
◆အကာအကွယ်လက်အိတ် / မျက်စိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး / မကျြနှာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Wear ။
မျိုလျှင်◆: ချက်ချင်းပင်တစ်ဦးအဆိပ်ရေးဗဟိုဌာနသို့မဟုတ်ဆရာဝန် / ဆရာဝန်မခေါ် ..
(ဒီတံဆိပ်ပေါ်မှာဖြည့်စွက်ပထမဦးဆုံးအကူအညီညွှန်ကြားချက်ကိုကြည့်ပါ) Specific ကုသမှု◆။
◆မျက်စိယားယံဆက်ရှိနေသေးလျှင်: ဆေးပညာဆိုင်ရာအကြံပေးချက်ကို / အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရယူလိုက်ပါ။
◆အနေနဲ့အတည်ပြုစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းစက်ရုံမှအကြောင်းအရာများကို / ကွန်တိန်နာများစွန့်ပစ်ခြင်း
leishmaniasis တိုက်ဖျက်ရေးဦးတည်မူးယစ်ဆေးပစ်မှတ်နှင့် inhibitors တွင်လတ်တလောတိုးတက်မှု
Lesihmaniasis အဆိုပါ genus Leishmania ၏ကပ်ပါးပိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားသည့်အဓိကလျစ်လျူရှုအပူပိုင်းရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီရောဂါတစ်ခုထက် ပို. လက်တွေ့ပုံစံများရှိပါတယ်နှင့် visceral ပုံစံဆိုးဝါးစဉ်းစားသည် ...
Acta Tropica 2018 vol ။ 181 စ။ 95 - 104,
ဝတ္ထု azacalix ၏ပေါင်းစပ်နှင့် anticancer လှုပ်ရှားမှုအကဲဖြတ်   pyrimidines arene
ဝတ္ထု azacalix ၏တစ်ဦးကစီးရီး  arene  pyrimidines ဖန်တီးလျက်, CCK-549 assay အသုံးပြု. စသည်တို့အတွက် A7, MCF5, SH-SY8Y နှင့် CNE လူ့ကင်ဆာဆဲလ်လိုင်းများတဘက်၌သူတို့ antiproliferative လှုပ်ရှားမှုများများအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် ...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတုဗေဒ 2018 vol ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 151 စ။ 214 - 225,
2,4-Dichloro-5- (trifluoromethyl) pyrimidine (3932-97-6) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း: